24.04.2019 17.11.2020 admin Life
Barashada Cilmiga Computerka luuqada ha englishka iyo carabiga Websiteka waxkabaro waxaa ka helesa barashada cilmiga Qeybihisa kala duwan. Waxyaabaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah sida: Barasha luuqada english-ka, Carabiga,accounting, quickbooks, Computerka, — hardware and software -photoshop iyo wixi la mid ah. Luuqada englishka oo si wacan u barato waxey kaa caawin doonta barashada cilmiga maadiga ah meel walbo aad dunida ka joogto. Koorsada luuqada english-ka waa koorsadii ugu horeysay oo ee nuuceeda ah oo af somali lagu bixiyo. Qeybo kala duwan ayee isku jirtaa koorsadaan english-ka ah sida: Qeybaan waxaa ku qaadan doontaa book one yadoo laga dhisi doono luuqada aasaaskeeda. Waxaad ku baranesa waxyaabo eey ka mid yihin: Higaada iyo ku dhawaaqista xarfaha luuqada englishka.
Afsoomaali free internet training. La qaado caruurtaada waqti aad la hadashid, sheekooyin uga sheekeysid isla markaas aad gabayo u sheegtid. Kuwaasi waa maaweelo muhim ah oo carrurta ku caawinaysa iney u diyaargaroobaan wax akhriska. U akhri lana akhri caruurtaada maalin kasta. Taasi waxay muujinaysaa maalinkasta wax u akhriga iyo waqtiga aad la qaadatid caruurtada muhimada ay leedahay.
U ogolaw carrurtadu iney doortaan buugaga aad rabtaan inaad wada akhrisataan. Tani waxay kaynaysaa xiisaha caruurtada. Xulo meel raaxa leh si aad wax ugu akhridid lana fadhiso carruurta meel u dhow. Tani dareen gaar ah ayey ku abuuraysaa xiliga wax akhriga.
Codkaaga iyo habka aad sheekada uu akhriyeysid waa iney sheekada la socdaan. Tan ayaa sheekada caruurta si weyn ugu xiiso gelinaysa. Markaad buug akhrididba ka sheekee sheekadaas. Ka wada xaajoodka musawirada iyo fikradaha muhimka ah ee buuga waxay hore u mariyaan garashada.
Tani waxay mitaal u noqoneysaa carrurta inaad ka heshid qiimaysidna wax akhriga. Caruurtaada si joogto ah u gey makhtabada. Maktabaddu waa meel qaayo leh oo laga heli karo buugag iyo ka badan.
NALA SOO XIDHIIDH - HALKAN RIIX